अधिकारी रवीन्द्र, असार १२, २०७६
अब सेक्स वा यौनिकता (प्राकृतिक लिंग) र जेन्डर वा लैंगिकता (सामाजिक लिंग) का बारेमा छोटो बहस गरौं । जन्मदा हामी महिला वा पुरुष भएर जन्मियौँ, त्यो हाम्रो सेक्स हो । यसले आधारभूत अंग–प्रत्यंगको भिन्नता दर्साउँछ । पुरा पढ्नुहोस्
हरिनारायण पण्डित, असार १२, २०७६
प्लास्टिकको प्रयोगले अनपेक्षित वातावरणीय समस्याका साथै साना केटाकेटीमा विविध किसिमका स्वास्थ्य जन्य समस्या सिर्जना गर्न सक्छ । आजको युगमा प्लास्टिकलाई विकराल वातावरणीय एवं पर्यावरणीय प्रकोपका रूपमा लिइन्छ । पुरा पढ्नुहोस्
साप्ताहिक संवाददाता , असार १२, २०७६
अनमोलसंगै चलचित्र ड्रिम्समार्फत रजतपटमा उदाएकी साम्राज्ञीले चलचित्र ‘मारुनी’ सम्म आइपुग्दा हरेक चलचित्रमा नयाँ अभिनेतासँग अन स्क्रिन रोमान्स गरेकी छिन् । साम्राज्ञीले ए मेरो हजुर–२ मा सलिनमान बनियाँसँग अभिनय गरेकी थिइन् भने इन्टु मिन्टु लण्डनमाका लागि धीरज मगरसँग उनको जोडी बाँधिएको थियो । पुरा पढ्नुहोस्
सन् १९९४ को सुपरहिट चलचित्र मोहराको अक्षयकुमार र रविना टण्डनमाथि फिल्मांकन गरिएको सुपरहिट सिजलिङ हट गीत टिप टिप बरसा पानीको रिमेक गरिने भएको छ । यो गीतलाई निर्देशक रोहित सेट्टीले आफ्नो अपकमिङ चलचित्र सूर्यवंशीका लागि पुनः छायांकन गर्ने भएका छन् । पुरा पढ्नुहोस्
नेपालका राजनीतिज्ञहरूले अंग्रेजी बोल्न नजानेर अनेकन ट्रोल बनेका उदाहरण अहिले पनि सामाजिक संजालमा छरपस्ट छन् । अंग्रेजी नजानेर एक अंग्रेज अहिले सामाजिक संजालमा राम्रैसँग ट्रोल भैरहेका छन् । पुरा पढ्नुहोस्
डेंगु : जान्नैपर्ने कुरा
सामान्य ज्वरो र डेंगुका कारणले आउने ज्वरोलाई त्यतिकै छुट्याउन सकिंदैन । डेंगु एक प्रकारको सरुवा रोग हो र यो रोग कुनै पनि उमेर समूहका मानिसमा देखा पर्न सक्छ । सामान्यतया यो रोगको लक्षण लामखुट्टेले टोकेको ४ देखि ७ दिनमा देखा पर्छ । पुरा पढ्नुहोस्
तालिमपश्चात् किशोरीहरूको जोस
राजाराम पौडेल, असार १२, २०७६
तालिममार्फत किशोरीहरूमा आत्मरक्षा गर्ने कलासँगै आत्मबल बढ्ने उनको अपेक्षा छ । ‘घटना नघटून्, किशोरीहरूलाई कसैले आक्रमण गर्न नसकून् भनेर वडाले सर्पोट गरेको हो,’ उनले भनिन् । तालिममा सहभागी किशोरीले तालिमपश्चात् आफूहरूमा आत्मबल बढेको प्रतिक्रिया दिए । उक्त डोजाङमा नियमित रूपमा तेक्वान्दो सिक्ने किशोर–किशोरीहरू पनि छन् । पुरा पढ्नुहोस्
डा. राजेन्द्र भद्रा, असार १२, २०७६
योनि महिलाको नली आकारको प्रजनन अंग हो र बाहिरवाट देखिने प्वाललाई योनिद्वार भनिन्छ । यही योनिद्वारको ठीक भित्रपट्टि गुजमुज्ज परेको पातलो छालाको पत्र वा झिल्ली हुन्छ जसलाई योनिच्छद (Hymen) ​​​​​​​ भनिन्छ । पहिले–पहिलेको जमानामा योनिमा भएको योनिच्छद यौनसम्पर्क गर्दा च्यातिएर रगत आउनुलाई नै केटीको कौमार्य भंग भए– नभएको आधार बनाइन्थ्यो । पुरा पढ्नुहोस्
अब नेपाली चलचित्र ‘सानो मन’ २७ असारमा रिलीज हुने भएको छ । यो चलचित्रलाई यसअघि २० असारमा रिलीज गर्ने भनिएको थियो । पुरा पढ्नुहोस्
खालिङ सिस्टर्स मुभिज प्रालिको ब्यानरमा निर्माण भएको चलचित्र ‘द डार्क एण्ड लाइट’ को सम्पूर्ण छायांकन सम्पन्न भएको छ । मंगलबार पोखरामा चलचित्रको ‘राधा कृष्ण....’ गीतको छायांकनसंगै चलचित्रको सम्पूर्ण छायांकन सम्पन्न भएको घोषणा गरिएको हो । पुरा पढ्नुहोस्
रिजल्ट आउनु अघि करिश्मा मानन्धरका प्रिन्सिपल के भन्छन् ?
माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) को नतिजा प्रकाशन हुन अब केहि घण्टा मात्रै बाँकी छ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको मिटिङ बसिरहेको छ, मिटिङ सकिनासाथ एसईईको नतिजा सार्वजनिक हुनेछ । सबै तयारी पूरा भइसकेको र बोर्डले निर्णय गरे लगत्तै नतिजा प्रकाशन गरिने परीक्षा नियन्त्रक विष्णुप्रसाद अधिकारीले बताए । पुरा पढ्नुहोस्